Best ဘီဘီစီမြန်မာပိုင်း မနက်ခင်းသတင်းအစီအစဉ် Podcasts | Most Downloaded Episodes
ဒေါ်လာ အရောင်းအဝယ်လုပ်ဖို့ ဗဟိုဘဏ်က ရည်ညွှန်းစျေးတက် အတိုးအလျော့ သတ်မှတ်ချက် ဘယ်လို သက်ရောက်မှုရှိလာမလဲ
စနေနေ့ မနက်ခင်း သတင်းများ (၁၃ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁)ဒေါ်လာ အရောင်းအဝယ်လုပ်ဖို့ ဗဟိုဘဏ်က ရည်ညွှန်းစျေးတက် အတိုးအလျော့ သတ်မှတ်ချက် ဘယ်လို သက်ရောက်မှုရှိလာမလဲ။ CDMမှာမပါတဲ့သူတွေကို စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေမှာ လက်မခံဘူးလို့ ဒီးမော့ဆို ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် ဘာကြောင့် ထုတ်ပြန်တာလဲ။ အမေရိကန်နဲ့ တရုတ် သမ္မတတို့ အွန်လိုင်းကနေတွေ့မယ်။ ကိုဗစ်တိုက်ဖျက်ဖို့ အေပက်ခေါင်းဆောင်တွေ ပူးပေါင်းမယ်။၂၀၂၂ ကမ္ဘာဖလား ဥရောပဇုန် ခြေစစ်ပွဲရလဒ်။လမ်းပတ် မန်နေဂျာ ရာထူး အတွက် နော်ဝှစ်ချ် ဆွေးနွေးမှု ရှေ့မဆက်။ စတဲ့ မြန်မာနဲ့ ကမ္ဘာက နောက်ဆုံးရ သတင်းတွေကို ရှုစားနားဆင်နိုင်ပါပြီ။ မနက်ပိုင်း ပေါ့ဒ်ကတ်စ် ရယူရန် - https://www.bbc.com/burmese/media-45625862ညပိုင်း ပေါ့ဒ်ကတ်စ် ရယူရန် - https://www.bbc.com/burmese/media-45625858ယူကျု - http://youtube.com/thebbcburmeseအင်စတာဂရမ် - https://www.instagram.com/bbcburmese/ဝက်ဘ်ဆိုက် - https://www.bbcburmese.com#ဘီဘီစီမြန်မာပိုင်း #မနက်ခင်းသတင်း #ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်
မြစ်ဆုံမှာ စက်ယန္တရားတွေသုံးပြီး ရွှေတူးဖော်နေတဲ့အပေါ် ဒေသခံတွေက ဘယ်လို စိုးရိမ်ပူပန်နေပါသလဲ
သောကြာနေ့ မနက်ခင်း သတင်းများ ( ၁၂ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁)မြစ်ဆုံမှာ စက်ယန္တရားတွေသုံးပြီး ရွှေတူးဖော်နေတဲ့အပေါ် ဒေသခံတွေက ဘယ်လို စိုးရိမ်ပူပန်နေပါသလဲ။ အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက် ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးလို့ သေဆုံးတဲ့ LGBT ၆ဦး ထက်မနည်းရှိခဲ့ပြီး ဖမ်းခံရတဲ့သူတွေလည်းရှိတာကြောင့် LGBT အခွင့်အရေးအတွက်ဘာတွေ လုပ်သွားဖို့ရှိပါသလဲ။ဥရောပတလွှားမှာ ကိုဗစ်ကူးစက်မှုပြန်လည်မြင့်တက်လာ။အိန္ဒိယနိုင်ငံတောင်ပိုင်းနဲ့ သိရီလင်္ကာမှာ မိုးသည်းထန်လို့ လူ ၄၀ သေ။ထူးချွန်သူတချို့ကို နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့် ဆော်ဒီပေး။အာဖရိက ၅ နိုင်ငံ ဆင်ကောင်ရေ စာရင်းပြုစုမယ်။ဥရောပဇုန် ကမ္ဘာဖလား ခြေစစ်ပွဲရလဒ်။အက်စ်တွန်ဗီလာ နည်းပြဖြစ် ဂျရတ်ကိုခန့်အပ်။စတဲ့ မြန်မာနဲ့ ကမ္ဘာက နောက်ဆုံးရ သတင်းတွေကို ရှုစားနားဆင်နိုင်ပါပြီ။ မနက်ပိုင်း ပေါ့ဒ်ကတ်စ် ရယူရန် - https://www.bbc.com/burmese/media-45625862ညပိုင်း ပေါ့ဒ်ကတ်စ် ရယူရန် - https://www.bbc.com/burmese/media-45625858ယူကျု - http://youtube.com/thebbcburmeseအင်စတာဂရမ် - https://www.instagram.com/bbcburmese/ဝက်ဘ်ဆိုက် - https://www.bbcburmese.com#ဘီဘီစီမြန်မာပိုင်း #မနက်ခင်းသတင်း #ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်
နို၀င်ဘာ ၁၁ ရက် ကြာသပတေး မနက်ခင်း သတင်းများ - BBC News မြန်မာ
- ပြည်သူပေးအပ်ခဲ့တဲ့အာဏာ ပြန်လည်ရယူပေးမယ်လို့ ပြောတဲ့ NLD ပါတီ ဗဟို အလုပ်ကော်မတီနဲ့ မေးမြန်းခန်း- တိုင်းနဲ့ပြည်နယ် ၀န်ကြီးချုပ်တွေ ၀န်ကြီးတွေကို နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်ချမှတ်နေတာ နိုင်ငံရေးအဖြေမဟုတ်ဘူးလို့ ဆိုပြီ- ဒေါက်တာအောင်မိုးညို ကိုစွဲဆိုထားတဲ့ အမှုအပေါ် စွဲချက်တင်သင့် မသင့် နှစ်ဘက်ရှေ့နေတွေက စစ်ဆေး မေးမြန်း- ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု တိုက်ဖျက်ရေး ညီလာခံမှာ အမေရိကန် နဲ့ တရုတ်တို့ ပူးတွဲ ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်တဲ့ အကြောင်း အပါအ၀င် ကြာသပတေး မနက်ခင်း နောက်ဆုံးရ မြန်မာနဲ့ နိုင်ငံတကာ သတင်းတွေကို ဘီဘီစီမြန်မာပိုင်းရဲ့ ပေါ့ဒ်ကတ်စ်၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်၊ ဖေ့စ်ဘုတ်နဲ့ ယူကျုတို့မှာ တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။မနက်ပိုင်း ပေါ့ဒ်ကတ်စ် ရယူရန် - https://www.bbc.com/burmese/media-45625862ညပိုင်း ပေါ့ဒ်ကတ်စ် ရယူရန် - https://www.bbc.com/burmese/media-45625858ဝက်ဘ်ဆိုက် - https://www.bbcburmese.com	ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် - https://www.facebook.com/BBCnewsBurmeseအင်စတာဂရမ် - https://www.instagram.com/bbcburmese/ယူကျု - http://youtube.com/thebbcburmese
နို၀င်ဘာ ၁၀ ရက် ဗုဒ္ဓဟူး မနက်ခင်း သတင်းများ - BBC News မြန်မာ
- ထိုင်းဘက်ကမြန်မာအလုပ်သမားတွေ ခေါ်ယူဖို့ ကြိုးပမ်းနေပေမယ့် ကွာရင်တင်းစရိတ် ညှိမရ ဖြစ်နေ- NLD ပါတီ၀င်၊ကိုယ်စားလှယ်နဲ့ CEC နေအိမ်တွေ စစ်ကောင်စီ လိုက်လံ ချိတ်ပိတ်နေတာ ဘာကြောင့်လဲ- နိုင်ငံတကာ အာကာသစခန်းကနေ အမေရိကန် အာကာသယာဥ်မှူး၄ယောက် ဆင်းသက်လာ- ကုလ၀န်ထမ်းတွေကို ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းထားတဲ့ အီသီယိုပီးယားက အကြောင်း အပါအ၀င် ဗုဒ္ဓဟူး မနက်ခင်း နောက်ဆုံးရ မြန်မာနဲ့ နိုင်ငံတကာ သတင်းတွေကို ဘီဘီစီမြန်မာပိုင်းရဲ့ ပေါ့ဒ်ကတ်စ်၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်၊ ဖေ့စ်ဘုတ်နဲ့ ယူကျုတို့မှာ တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။မနက်ပိုင်း ပေါ့ဒ်ကတ်စ် ရယူရန် - https://www.bbc.com/burmese/media-45625862ညပိုင်း ပေါ့ဒ်ကတ်စ် ရယူရန် - https://www.bbc.com/burmese/media-45625858ဝက်ဘ်ဆိုက် - https://www.bbcburmese.com	ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် - https://www.facebook.com/BBCnewsBurmeseအင်စတာဂရမ် - https://www.instagram.com/bbcburmese/ယူကျု - http://youtube.com/thebbcburmese
နို၀င်ဘာ ၉ ရက် အင်္ဂါ မနက်ခင်း သတင်းများ - BBC News မြန်မာ
- ဒဂုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်တွေကို စစ်တရားရုံးမှာတင်ပြီး နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်ချမှတ်နေ- ထောင်၂နှစ်ချခံထားရတဲ့ မကွေးလူမှုရေး၀န်ကြီးဟောင်းကို နောက်တမှုနဲ့ စွဲချက်တင်ဖို့ ထောင်တရားရုံးဆုံးဖြတ်- Lockdown ချထားတဲ့ လိုင်ဇာမှာ ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးသားတွေမှာ ရာချီပိုးတွေ့ပြီး သူတို့ကို သီးသန့်ခွဲထားဖို့ စီစဥ်- ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု တိုက်ဖျက်ရေး ညီလာခံမှာ အမေရိကန် သမ္မတဟောင်း အိုဘားမား က ရုရှားနဲ့ တရုတ် ခေါင်းဆောင်တွေ ညီလာခံ လာမတတ်လို့ အပြစ်တင်လိုက်တဲ့ အကြောင်း အပါအ၀င် အင်္ဂါ မနက်ခင်း နောက်ဆုံးရ မြန်မာနဲ့ နိုင်ငံတကာ သတင်းတွေကို ဘီဘီစီမြန်မာပိုင်းရဲ့ ပေါ့ဒ်ကတ်စ်၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်၊ ဖေ့စ်ဘုတ်နဲ့ ယူကျုတို့မှာ တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။မနက်ပိုင်း ပေါ့ဒ်ကတ်စ် ရယူရန် - https://www.bbc.com/burmese/media-45625862ညပိုင်း ပေါ့ဒ်ကတ်စ် ရယူရန် - https://www.bbc.com/burmese/media-45625858ဝက်ဘ်ဆိုက် - https://www.bbcburmese.com	ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် - https://www.facebook.com/BBCnewsBurmeseအင်စတာဂရမ် - https://www.instagram.com/bbcburmese/ယူကျု - http://youtube.com/thebbcburmese
နို၀င်ဘာ ၈ ရက် တနင်္လာ မနက်ခင်း သတင်းများ - BBC News မြန်မာ
- တနိုင်းမှာ ကေအိုင်အေနဲ့ စစ်ကောင်စီ ရံဖန်ရံခါ ထိတွေ့တိုက်ပွဲရှိပေမယ့် အခြေခံပညာကျောင်းတွေ ပြန်ဖွင့်- မြန်မာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးမှာ ဟင်းချိုမှုန့်၊ ဆီ၊ လူသုံးကုန်နဲ့ ဘုရားကျောင်းဆောင်က အစ နယ်လုံခွင့်ပြုချက်ပါမှ သယ်ခွင့်ရ- ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုတွေကြောင့် ၂နှစ်နီးပါး ပိတ်ထားတဲ့ အမေရိကန် ပြည်၀င်ခွင့် ဒီနေ့ စဖွင့်ဖို့ရှိ- နာမယ်ကျော် လစ်ဗာပူးလ် က ၀က်စ်ဟမ်းကို ရှုံးပွဲကြုံပြီး အာဆင်နယ် က ၀က်ဖို့ဒ်ကို နိုင်ခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ဘောလုံးပွဲတွေ အကြောင်း အပါအ၀င် တနင်္လာ မနက်ခင်း နောက်ဆုံးရ မြန်မာနဲ့ နိုင်ငံတကာ သတင်းတွေကို ဘီဘီစီမြန်မာပိုင်းရဲ့ ပေါ့ဒ်ကတ်စ်၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်၊ ဖေ့စ်ဘုတ်နဲ့ ယူကျုတို့မှာ တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။မနက်ပိုင်း ပေါ့ဒ်ကတ်စ် ရယူရန် - https://www.bbc.com/burmese/media-45625862ညပိုင်း ပေါ့ဒ်ကတ်စ် ရယူရန် - https://www.bbc.com/burmese/media-45625858ဝက်ဘ်ဆိုက် - https://www.bbcburmese.com	ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် - https://www.facebook.com/BBCnewsBurmeseအင်စတာဂရမ် - https://www.instagram.com/bbcburmese/ယူကျု - http://youtube.com/thebbcburmese
နို၀င်ဘာ ၇ ရက် တနင်္ဂနွေ မနက်ခင်း သတင်းများ - BBC News မြန်မာ
- ရန်ကုန်တိုင်းမှာ ဒု-ကာကွယ်ဆေး လာထိုးသူလျော့ကျ ၊ Booster ကာကွယ်ဆေး ဘယ်သူတွေကို ထိုးပေးမလဲ- ရိုဟင်ဂျာအရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားတဲ့ ခေါင်းဆောင် လုပ်ကြံခံရပြီးနောက် ပရဟိတသမားတွေ လုံခြုံရေး စိုးရိမ်နေ- ထိုင်းမှာ တော်၀င်မိသားစုအကြောင်း ပြောဆိုရေးသားသူတို့ အရေးယူတဲ့ ဥပဒေကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ ကြိုးပမ်းပြီ- မန်ယူရှုံးပွဲကြုံပြီး ချယ်လ်ဆီးက ဘန်လေနဲ့ သရေကျတဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ဘောလုံးပွဲတွေ အကြောင်း အပါအ၀င် တနင်္ဂနွေ မနက်ခင်း နောက်ဆုံးရ မြန်မာနဲ့ နိုင်ငံတကာ သတင်းတွေကို ဘီဘီစီမြန်မာပိုင်းရဲ့ ပေါ့ဒ်ကတ်စ်၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်၊ ဖေ့စ်ဘုတ်နဲ့ ယူကျုတို့မှာ တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။မနက်ပိုင်း ပေါ့ဒ်ကတ်စ် ရယူရန် - https://www.bbc.com/burmese/media-45625862ညပိုင်း ပေါ့ဒ်ကတ်စ် ရယူရန် - https://www.bbc.com/burmese/media-45625858ဝက်ဘ်ဆိုက် - https://www.bbcburmese.com	ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် - https://www.facebook.com/BBCnewsBurmeseအင်စတာဂရမ် - https://www.instagram.com/bbcburmese/ယူကျု - http://youtube.com/thebbcburmese
ဖိုင်ဇာက ထုတ်တဲ့ ကိုဗစ်သောက်ဆေး ၈၉ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါး ထိရောက်လို့ ကုမ္ပဏီက ထုတ်ပြန်
စနေနေ့ မနက်ခင်း သတင်းများ (၃၀ အောက်တိုဘာ၂၀၂၁)ဖိုင်ဇာက ထုတ်တဲ့ ကိုဗစ်သောက်ဆေး ၈၉ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါး ထိရောက်လို့ ကုမ္ပဏီက ထုတ်ပြန်။ဖယ်ခုံမြို့နယ်ထဲက စစ်ရှောင်တွေရဲ့ အခြေအနေတွေက ဘယ်လိုရှိနေပါ သလဲ။တိုက်ပွဲတွေကြောင့်စိုက်ပျိုးရေးမလုပ်နိုင်လို့ မိုးမောက်မြို့နယ်ထဲက တောင်သူတွေ စားဝတ်နေရေး အခက်ကြုံ။ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဥ် ဦးဆောင်အဖွဲ့ PPSTရဲ့ ၂ရက်ကြာ ဆွေးနွေးပွဲမှာ ဘာတွေ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသလဲ။ပတ်ဝန်းကျင်အရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တွေက အရေးယူ ဆောင်ရွက်ဖို့လိုတာတွေကို အချိန်ရွှေ့ဆိုင်းလို့ ပတ်ဝန်းကျင် အရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ Greta Thunberg ပြော။ ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲရလဒ်။ ဘာစီလိုနာကို ပြန်သွားတဲ့ ဇာဗီ။စတဲ့ မြန်မာနဲ့ ကမ္ဘာက နောက်ဆုံးရ သတင်းတွေကို ရှုစားနားဆင်နိုင်ပါပြီ။ မနက်ပိုင်း ပေါ့ဒ်ကတ်စ် ရယူရန် - https://www.bbc.com/burmese/media-45625862ညပိုင်း ပေါ့ဒ်ကတ်စ် ရယူရန် - https://www.bbc.com/burmese/media-45625858ယူကျု - http://youtube.com/thebbcburmeseအင်စတာဂရမ် - https://www.instagram.com/bbcburmese/ဝက်ဘ်ဆိုက် - https://www.bbcburmese.com#ဘီဘီစီမြန်မာပိုင်း #မနက်ခင်းသတင်း #ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်
ထိုင်းမှာ ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ မြန်မာက တရားမဝင်သွားရောက် အလုပ်လုပ်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့ အလုပ်သမားတွေရဲ့ အခြေအနေ ဘယ်လိုရှိနေလဲ
သောကြာနေ့ မနက်ခင်း သတင်းများ ( ၅ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁)ထိုင်းမှာ ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ မြန်မာက တရားမဝင်သွားရောက် အလုပ်လုပ်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့ အလုပ်သမားတွေရဲ့ အခြေအနေက ဘယ်လိုရှိနေလဲ။ မြဝတီမြို့က ABSDFရဲ့ ဆက်ဆံရေးရုံးကို ဘာကြောင့် ဝင်ဖမ်းတာလဲ။ ယူအန်နဲ့ အာဆီယံ အထူးကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ စေ့စပ်ဆွေးနွေးဖို့ ဘေလ်ရစ်ချက်ဆန် အကြံပြု။ဥရောပမှာ ကိုဗစ် ကူးစက်မှုမြင့်လာတာ ကမ္ဘာတခုလုံးအတွက် အချက်ပေးသံလို့ WHO ပြော။ကုလသမဂ္ဂရဲ့ ရာသီဥတု ပြောင်းလဲရေးဆိုင်ရာ ထိပ်သီး ဆွေးနွေးပွဲဟာ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ဆွေးနွေးပွဲတခုမဟုတ်ဘူးလို့ Greta Thunbergဝေဖန်။ ယူရိုပါလိဂ်ပွဲရလဒ်။စတဲ့ မြန်မာနဲ့ ကမ္ဘာက နောက်ဆုံးရ သတင်းတွေကို ရှုစားနားဆင်နိုင်ပါပြီ။ မနက်ပိုင်း ပေါ့ဒ်ကတ်စ် ရယူရန် - https://www.bbc.com/burmese/media-45625862ညပိုင်း ပေါ့ဒ်ကတ်စ် ရယူရန် - https://www.bbc.com/burmese/media-45625858ယူကျု - http://youtube.com/thebbcburmeseအင်စတာဂရမ် - https://www.instagram.com/bbcburmese/ဝက်ဘ်ဆိုက် - https://www.bbcburmese.com#ဘီဘီစီမြန်မာပိုင်း #မနက်ခင်းသတင်း #ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်
နို၀င်ဘာ ၄ ရက် ကြာသပတေး မနက်ခင်း သတင်းများ - BBC News မြန်မာ
- ခြေထောက်ကနေပိုး၀င်ရာက ထောင်ဆေးရုံကနေ အပြင်ဆေးရုံရွှေ့ကုသနေရတဲ့ ကိုမြအေး အခြေအနေ- မိုင်တဲတာ၀ါတိုင်နား ရဲနဲ့စစ်တပ်ထောင်ထားတဲ့မိုင်းကြောင့် မီတာသွားဖတ်သူ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတယ်လို့ ဒေသခံပြော- အိန္ဒိယမှာ ဖော်စပ် ထုတ်လုပ်တဲ့ Covaxin ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေးကို ကမ္ဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့ အတည်ပြု- ဂျာမနီမှာ ကာကွယ်ဆေးမထိုးသူတွေကြား ကူးစက်မှု တဟုန်ထိုး မြင့်တက်နေတယ်လို့ ကျန်းမာရေး၀န်ကြီးပြော- လစ်ဗာပူးနဲ့ မန်စီးတီး တို့ ချန်ပီယံလိဂ်မှာ နိုင်ပွဲဆင်ခဲ့တဲ့ ဘောလုံးပွဲတွေ အကြောင်း အပါအ၀င် ကြာသပတေး မနက်ခင်း နောက်ဆုံးရ မြန်မာနဲ့ နိုင်ငံတကာ သတင်းတွေကို ဘီဘီစီမြန်မာပိုင်းရဲ့ ပေါ့ဒ်ကတ်စ်၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်၊ ဖေ့စ်ဘုတ်နဲ့ ယူကျုတို့မှာ တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။မနက်ပိုင်း ပေါ့ဒ်ကတ်စ် ရယူရန် - https://www.bbc.com/burmese/media-45625862ညပိုင်း ပေါ့ဒ်ကတ်စ် ရယူရန် - https://www.bbc.com/burmese/media-45625858ဝက်ဘ်ဆိုက် - https://www.bbcburmese.com	ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် - https://www.facebook.com/BBCnewsBurmeseအင်စတာဂရမ် - https://www.instagram.com/bbcburmese/ယူကျု - http://youtube.com/thebbcburmese
© 2020 OwlTail All rights reserved. OwlTail only owns the podcast episode rankings. Copyright of underlying podcast content is owned by the publisher, not OwlTail. Audio is streamed directly from BBC Burmese Radio servers. Downloads goes directly to publisher.